Nhau - Mhando shanu akabatana machine centre
Simbiso yemhando yepamusoro
Cnc machine zvikamu
Alminum CNC machine
Mapurasitiki CNC Machining
Simbi CNC machine
Die Kukanda Zvikamu
Mhando shanu akabatana machine centre
Vazhinji mashanu akabatana machining nzvimbo anotora 3 + 2 mamiriro, ndiko kuti, XYZ matatu Linear inofamba masanhu pamwe maviri ABC matatu namasanhu kutenderera kumativi XYZ akabatana azvaitwa. Kubva pane yakakura chikamu, pane kyzab, xyzac uye xyzbc. Zvinoenderana nekubatanidzwa kwechimiro chemasanhu maviri anotenderera, inogona kuve yakakamurwa kuita matatu marudzi mashanu akabatana ekubatanidza machining nzvimbo: kaviri rotary tafura yerudzi, turntable ine swing musoro werudzi, uye kaviri swing musoro werudzi. 1: mashanu akabatana machine centre pamwe kaviri turntable mamiriro:
A-axis + c-axis yakapetwa kaviri dhizaini, iyo inoshanda inogona kutenderera yakatenderedza x-axis, inova-axis. Pakati petafura panogona kutenderera madhigirii makumi matatu nemakumi matatu panotenderera Z axis, inova iyo c axis. Nesanganiswa ye AC maviri masanhu, kunze kwepasi pezasi peiyo workpiece haigadziriswe, mamwe maficha mashanu anogona kugadziriswa. Zvakanakira muchina uyu ndezvekuti chokurukisa chimiro chiri nyore uye chakaomarara, uye mutengo wacho wakaderera, asi huremu hwekubata hwebasa hunogumira
Mhando iyi mashanu akabatana linkage machine centre rinoumbwa xyzbc akabatana. Chokurukisa shanu akabatana linkage machine centre iri kunyanya kuchinja, uye worktable nzvimbo risingaperi, asi chokurukisa mamiriro yakaoma uye mutengo iri kumusoro.
3: Five akabatana linkage machine centre pamwe kaviri famba musoro mamiriro:
Iko kutenderera kwakaringana kwesimbi yekugadzirisa kunogadziriswa nekushandisa yakakwira torque drive shaft. Chimiro chemuchina wese chinonyanya mhando yemusuwo.
Post nguva: Oct-12-2020
tsamba yedu yevhiki nevhiki
Muvhunzo For Pricelist
Chikamu 816, No. 12, Changping Avenue, Changping Town, Dongguan Guta, Guangdong Province, China 523570
Tinofanira sei kunyatso sarudza yepamusoro qual ...
Chii chiri ramangwana reNC machine specia ...
Kudzora kwekugadzirisa kwemazvo kweCCC lath ...
Maitiro ekuvandudza mashandiro edu ekugadzira ...
Maitiro ekugadzirisa cnc kugadzira indasitiri zvakanaka